बि’दा हुँदै खनाल : को बन्ला नयाँ आईजीपी ? – Khabarhouse
बि’दा हुँदै खनाल : को बन्ला नयाँ आईजीपी ?
Khabar house | २७ माघ २०७६, सोमबार ०५:४२ | Comments
काठमाडौं : प्रहरी संगठनले माघ २९ गते नयाँ प्रहरी नेतृत्व पाउँदैछ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल ३० वर्षे सेवाहदका कारण मंगलबार अवकाश पाउँदैछन्। खनालपछि कसले २७ औं आईजीपी हत्याउने भनेर यो पटक राज नीतिक घम्साघम्सी देखिएको छैन। सरकारले डीआइजीद्वय ठाकुर ज्ञवाली र तारिणी लम्साल मध्ये एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनेछ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जेष्ठतामा लम्साल भन्दा ज्ञवाली अघि छन्। दुवै २०४७ असार २५ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। दुईमध्ये जो महानिरीक्षक भएपनि आगामी असार २४ गते सेवाहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । सरकारले आईजीपी नियुक्तीको पुरानै नजिरलाई नकाट्ने हो भने ज्ञवालीकै पल्लाभारी निश्चित छ।
यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जेष्ठतालाई आधार बनाउँदै आएको छ। सोही आधारमा नेपाल प्रहरीमा खनाल र सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक बनेका हुन्। डीएसपी हुँदा ६ वर्ष ला’गूऔषध, एकवर्ष रुकुम र एक वर्ष बुटवल बसेका ज्ञवाली २०६६ मा एसपीमा बढुवा भएका हुन्। एसपी भएपछि उनी दाङ, बारा र झापाको जिल्ला इ’न्चार्ज भए।
एसएसपी हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, नेपालगञ्ज र सीआ’ईबीमा काम गरेका उनी डीआईजी भएपछि अख्तियार दु’रुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरे। अहिले उनी प्रदेश १प्रहरी प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् सम्भवत सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरीको नयाँ नेतृत्व च’यन गर्दैछ। महानिरीक्षक खनालसँगै एआईजी पुष्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्न्यात सेवाहदकै कारण अव’काश पाउँदैछन्।